Wararka - Suuqa Methionine oo dul wareegaya meelaha hoose
Suuqa Methionine oo dul wareegaya meelaha hoose
Mustaqbalka dhow market suuqa methionine wuxuu ku shaqeynayay inta u dhaxeysa taariikhda ugu hooseysa, dhawaana waa la soo saaray. Qiimaha hadda waa RMB 16.5-18 / kg. Awoodda wax soo saarka gudaha ee cusub ayaa si tartiib tartiib ah loo sii daayay sanadkan. Sahayda suuqku waa badan tahay oo heerka hoose ayaa dul wareegaya. Xigashooyinka suuqyada Yurub ayaa ku dhacay 1.75-1.82 euro / kg. Waxaa saameeyay sicirka macaamilka oo daciif ah iyo kororka wax soo saarka gudaha, soo dejinta methionine ayaa hoos u dhacday bilihii la soo dhaafay.
Laga bilaabo Janaayo ilaa Julaay 2020, soo dejinta methionine ee dalkaygu wuxuu hoos u dhacaa 2% sanadkiiba
Sida laga soo xigtay tirakoobka kastamka, bishii Luulyo 2020, dalkaygu wuxuu soo dhoofiyay 11,600 tan oo ah alaabada adag ee methionine, hoos udhaca bil-bil ah ee 4,749 tan, hoos udhaca sanad-sanadka ah ee 9614.17 tan, hoos udhaca 45.35%. Bishii Luulyo 2020, dalkaygu wuxuu ka soo dhoofiyay warshadaha 1,810 tan warshadaha Malaysia, koror 815 ton bishii-bishii iyo sanad-ka-sanadka oo ah 4,813 tan. Bishii Luulyo, soo dejinta dalkayga ee Singapore aad ayuu hoos ugu dhacay oo wuxuu gaadhay 3340 tan, bil-bil ah hoos u dhaca 4840 tan iyo hoos u dhac sannadle ah oo gaaraya 7,380 tan.
Laga soo bilaabo Janaayo ilaa Julaay 2020, soo dejinta methionine ee dalkayga waxay dhamaayeen 112,400 tan, hoos ayey u dhacday sanadkii 2.02%. Saddexda dal ee ugu sarreeya waa Singapore, Belgium, iyo Malaysia. Kuwaas waxaa ka mid ah, soo dejinta laga keenay Singapore ayaa lagu tiriyay saamiga ugu sarreeya, iyadoo wadar ahaan la soo dhoofiyay 41,400 tan, oo u dhiganta 36.8%. Waxaa ku xigta Biljimka, tirada guud ee soo dejinta laga soo bilaabo Janaayo ilaa Luulyo waxay ahayd 33,900 tan, koror sanad-sannadeed ah 99%. Qiyaasta isugeynta ee laga soo dhoofiyo Malaysia waxay ahayd 24,100 tan, hoos ayey u dhacday sanadkii 23.4%.
Warshadaha digaagga ayaa sii wadaya inay lumiyaan lacag
Marka ballaarinta warshadaha digaagga ay la kulmaan aafada cusub ee faafa, waxtarka taranka digaagga ayaa jilicsan. Sannadkan, beeralaydu waxay la kulmeen khasaaro waqti dheeri ah. Celceliska qiimaha digaagga broiler-ka ganacsi waa 3.08 yuan / kg, hoos ayuu u dhacay sanadkii sanadkii 45.4% iyo sanadkii 30%. Cudurka qandhada doofaarka ee Afrika wuxuu xadidan yahay meelaha isticmaalka kale iyo kobaca baahida suuqyada. Kaliya maahan in broilers iyo ukunta ay lumiyaan lacag, laakiin shinbiraha hilibka sidoo kale rajo ma ahan. Dhawaan, Feng Nan, Xoghayaha Guud ee Laanta Warshadaha Digaagga ee Ururka Xannaanada Xoolaha ee Shandong, wuxuu sheegay in tirada hadda ee shinbiraha ku jira warshadaha digaagga dalkayga ay u dhexeyso 13 milyan illaa 14 milyan, taas oo aad uga badatay dheelitirka sahayda iyo baahida. . Awoodda xad-dhaafka ahi waxay sababtay in faaiidada warshadaha ay hoos u dhacdo, warshadaha duck-ga ayaa ku jira xaalad lumis ah dhammaan silsiladda warshadaha. Hoos u dhaca ku yimaadda beerashada digaagga ayaan ku habboonayn baahida, iyo suuqa methionine ayaa hoos u dhacaya.
Isku soo wada duuboo, in kasta oo soo dejinta methionine ay hoos u dhacday bilihii la soo dhaafay, haddana dhawaan ayaa la soo sheegay in warshadda methionine ee Mareykanku ay hakisay wax soo saarkeeda duufaanka Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, soosaarayaasha waxsoosaarka gudaha ayaa kordhay, xigashooyinka soosaarayaasha ayaa daciif ah, waxtarka beeraha digaaga ayaa jilicsan, iyo bixinta methionine waa mid badan oo daciifnimo muddo gaaban ah Way adag tahay in la beddelo.
Nafaqada xoolaha, Fasalka Cuntada L-Threonine, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka L-Threonine Pharm, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine,